LG က G3 VS ကို LG G4 | Androidsis
Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - ယနေ့ LG G3 နှင့် LG G4
ကျနော်တို့ဤအပိုင်းကိုပြန်ဖြစ်ကြသည် Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု Android terminal ၏မတူညီသောမော်ဒယ်များနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီး၎င်းသည်မော်ဒယ်တစ်ခု၏မြင့်မားသောနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းနှင့်ဝယ်။ စာရွက်ပေါ်တွင်ပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ terminal ၏လည်ပတ်မှုနှင့်၎င်း၏နေ့စဉ်သုံးအသုံးဝင်မှု။ ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ကအသေအပျောက်တိုက်ပွဲမှာရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ LG G3 နှင့် LG G4 တို့ဖြစ်သည်.
ဘယ်လိုအမြဲတမ်းဤ Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် terminal သည်အခြားတစ်ခုထက် ပို၍ မြန်သည်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည်ကိုရှာဖွေရန်ဟန်ဆောင်လိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်သစ်စမတ်ဖုန်းများတွင်အသုံးများသောအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ မှလွဲ၍ သင်ရှိမရှိကိုသင်မြင်တွေ့စေချင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအားလုံးအသုံးပြုသောကွာခြားချက်မှာလွန်ခဲ့သည့်အချိန်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြားပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိသည့်အခြားတစ်ခုအတွက် terminal တစ်ခု၏သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုရွေးချယ်ရန်ကွာခြားချက်မှာသိသာထင်ရှားသည်။
1 LG G3 နှင့် LG G4 တို့ဖြစ်သည်
2 ဗီဒီယိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ် LG G3 နှင့် LG G4
LG G3 နှင့် LG G4 တို့ဖြစ်သည်
အမှတ် LG LG
ပုံစံ LG က G3 D855 LG G4 H815
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 5.02 အန်းဒရွိုက် 5.1
ဖန်သားပြင် 5'5 "IPS Quantum နည်းပညာဖြင့် 5'5 "IPS
resolution ကို qHD qHD
Processor ကို 801 Ghz တွင် Snapdragon2Quadcore 806 Ghz တွင် Snapdragon 1 Hexacore
GPU ကို Adreno 330 Adreno 418
ရမ်2Gb3Gb
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16 Gb / 32 Gb 32 Gb
microSD ကဒ်များ ဟုတ်ကဲ့ 128 Gb အထိပါ ဟုတ်ပါတယ် 1 Tb အထိ
ရှေ့ကင်မရာ 2'1 mpx ၁၃ mpx
နောက်ကင်မရာ ၁၃ mpx ၁၃ mpx
ရှုထောင့် 146.3 74.6 8.9 မီလီမီတာ 148.9 76.1 9.8 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 149 ဂရမ် 155 ဂရမ်
ဘက်ထရီ ဖယ်ရှားနိုင်သော 3000 mAh Li-ion ဖယ်ရှားနိုင်သော 3000 mAh Li-ion
စြေး ခန့်မှန်းခြေ 330 ယူရို ယူရို 540 ကနေ
ဗီဒီယိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ် LG G3 နှင့် LG G4
အဘယ် terminal ကိုအခြားထက်သာ။ ကောင်း၏သည်အကြား, ဒီ duel ၌တည်၏ LG G3 နှင့် LG G4 တို့ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် terminal ၏ဘေးဘက်တွင်မဆိုနေရာမယူလိုပါ။ ဤသည်မှာနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံး application များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည့်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့စဉ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသင်မြင်နိုင်ရန်စစ်မှန်သောနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည် တတ်နိုင်သမျှလက်တွေ့ကျကျသောအသုံးပြုမှုအတွက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အကြား။
ပြီးတော့မင်းဘယ် terminal ကိုပိုနှစ်သက်သလဲ။ LG G3 လားဒါမှမဟုတ် LG G4 လား။ ဘာလို့မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာလဲ သင်၏အဖြေများအားလုံးကိုဤတူညီသောစာမူ၏မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်စောင့်ဆိုင်းပါ Androidsis ပါ.
မင်းကြည့်ချင်ရင် LG G4 ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်အပြည့်အစုံ သင်ဤသည်အခြားပို့စ်အားဖြင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ် LG မှဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ terminal နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်အားလုံးကိုမည်သည့်နေရာတွင်သင်သိရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - ယနေ့ LG G3 နှင့် LG G4
ရှေ့ဖက်ရှိ g3 x သည်ပိုမိုလှပပြီးနောက်ကျောတွင်ရှိသော g4 x က၎င်း၏သားရေအဖုံးနှင့် g4 ၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ကင်မရာကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။
အကြီးမားဆုံးခြားနားချက်ကတော့ကင်မရာပါ။ G3 ကပိုပြီးလှတယ်၊ G4 ကနှစ်ဆပေးရမယ်။
ယခုတွင်သင်သည် Meizu M2 Note ကိုယူရို ၁၅၀ အောက်သာဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
Live Screen Streaming၊ သင်၏ဂိမ်းများကို Twitch နှင့် YouTube သို့လွှင့်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်